Akụkọ - Otu ụbọchị nke ụlọ njikọ
Iji mee ka oge ndị ọrụ were rụpụta ọrụ, belata nrụgide ọrụ ha, ma nye ha ohere zuru ike mgbe ọrụ gachara, Hangzhou Hengao Technology Co., Ltd. haziri ọrụ ụlọ na Disemba 30, 2020, na ndị ọrụ 57 nke ụlọ ọrụ ahụ keere òkè na ọrụ a. Mgbe emechara baptism nke oke mmiri ozuzo ahụ, "Osimiri Silver Blue" a na-adịghị ahụ anya pụtara na mbara igwe. Na 9: 30, ndị ọrụ niile gbakọtara n'ọnụ ụzọ ụlọ nnukwu ụlọ wee pụọ maka ebe a na-aga - The Exposition Park. N’ụzọ ahụ niile, anyị chịrị ọchị ma chịa ọchị, na-awagharị n’okporo ụzọ na-enweghị ihe ga-eju anyị obi. Na elekere 10 nke elekere, ndị ọrụ niile ga-agbakọta n’ihu ogige ahụ iji lelee ihe ngosi ngosi otu ndị na-eme. E kere ọrụ a n'ime akụkụ ise: ịga n'ogige ntụrụndụ, buru mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, nkedo nke ime ụlọ, egwuregwu otu, na anụ oriri na-atọ ụtọ.
Anyị gbasoro onye ndu n'ime ogige ngosi ogige maka nleta. Anyị hụrụ na n'otu griin haus enwere osisi nkịtị na China na osisi dị oke ọnụ na mba ofesi, ma kpuchie ya na ihe ngosi ahịhịa pụrụ iche. Mgbe anyị gara nleta, anyị niile nwere mmetụta nke anya. N'ime usoro nchịkọta mkpụrụ osisi na akwukwo nri, anyị nwere ahụmịhe n'ezie, kesaa ahụmịhe nke ịkọ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, na-ahapụ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri greenhouses anyị enweghị obere nke "trofi".
Enwere obere oge ezumike mgbe nri ehihie gasịrị. Mgbe ahụ, ndị ọrụ niile gbakọtara na oghere oghere maka egwuregwu mmeba nke otu, e kewara anyị na otu 5, na egwuregwu ọ bụla iji sọọ mpi n'ike, ndị otu egwuregwu na-egwu egwu na nke ọma. N'oge a, emela ka United States igwe gbaa égbè eluigwe, detụ ụtọ anụ ahụ ọkara oge na-awụsa mmiri ozuzo na-abịa na mberede, nnukwu ezinụlọ abụghị ajọ ihu igwe bụ otu ihe ọchị, na ọkara nke abụọ nke ụbọchị ọmụmụ na ngozi onye obula dika edubere ya, na ndu nke kpakpando anarala onyinye ubochi omumu, ulo oru nke ihe ijuanya a, ka onye obula kpoo oku na mmiri oyi. Onye ọ bụla na-achị ọchị, ihe ịga nke ọma ọgwụgwụ nke otu - ewu ihe omume. Site na ọrụ ụlọ a, anyị mere ka nghọta dịkwuo n'otu, bịaruo mmetụta nke onye ọ bụla nso, mee ka njikọta na njikọta nke ndị ọrụ niile nke Hangzhou Hengao Technology, ka anyị jiri ịnụ ọkụ n'obi dị elu rụọ ọrụ n'ọdịnihu.